Kwiminyaka yakutshanje, umzi mveliso wefanitshala wase China uphuhlise ngokumangalisayo. Ngelixa uphuculo olukhawulezileyo sefenitshala yeofisi, umgangatho weemveliso ukwangumbandela ongenakutyeshelwa. Ke ngoko, abavelisi befanitshala bahlala bekhetha izixhobo zovavanyo lwefanitshala njengeemveliso zabo. Njengomnye wabenzi begcisa bokuvavanya izixhobo zefanitshala e-China, i-TST Instrument (Fujian) Co, Ltd iyathandwa ngamashishini kwilizwe liphela. Umtsalane iinkampani ezininzi ukutyelela izityalo zethu zemveliso kuhlolo lwamasimi, kwaye zibeka isiseko esihle sentsebenziswano yexa elizayo. Isiseko, yintoni ke le nto esenza ukuba izixhobo ze-TST zitsalele ingqalelo kuye kwaye zithande wonke umntu?
Izizathu zokukhetha isixhobo se-TST:
Ithwelwe ngokweemfuno zabathengi, ukusuka kumacandelo amancinci ukuya kwimibala emikhulu yokubonakala kwemibala, imigangatho, inokwenziwa ngokwezifiso kubathengi, ukuvumela ukuba uchithe imali encinci ukuthenga izixhobo ezifanelekileyo zokuvavanya ezifanelekileyo.
Ngokusekwe ekugayeni nasekufumaneni itekhnoloji yokuvelisa ephezulu yamazwe aphesheya, i-TST Instrument (Fujian) Co, Ltd ngesibindi iphuhlisa, yenza uhlengahlengiso, kwaye izama ukuyila, kwaye isebenzise eyona migama iphambili yamazwe jikelele kwimveliso, kwaye iphuhlise iimveliso ezintsha kunye nesiTshayina. iimpawu.
3. Iqela leengcali:
I-TST iqokelela iingcali kuyilo lwesoftware, oomatshini, uxinzelelo lweoyile, uxinzelelo lwempompo, oomatshini bombane, oomatshini zombane, kunye ne-R & D, ukuqinisekiswa komgangatho, ukulawulwa kobomi, kunye nokuvavanywa ukufumana ulwazi lwexesha langempela kunye nokuphuhlisa iimveliso kunye neenkonzo eziphambili.
4. Inkonzo emva kokuthengisa kunye nokuzibophelela:
Isixhobo sokuvavanya esiphuhliswe yinkampani yethu sinetekhnoloji ethe xhaxhe, ulwakhiwo oluntsonkothileyo kunye nokudityaniswa okuphezulu, kwaye ezona zinto ziphambili zidityaniswe nezinto zokuvavanya ukuchaneka kokuphela komhlaba. Ngokubanzi, iiyunithi zokulungisa izinto zomntu wesithathu azinaso isakhono sokugcina nokulungisa, kunye nesikhokelo sesicelo sezixhobo, ukusombulula iingxaki nokulungisa sinokwenziwa kuphela yinkampani yethu. Ukuthembela kwiqela eliphezulu lesiphelo emva kokuthengisa kunye nenkqubo egqibeleleyo yokufayilisha kunye nolawulo lolawulo lolondolozo, izixhobo ze-TST zibonelela abasebenzisi ngexesha elifanelekileyo, lokucingisisa kunye nokugqibelela kwenkonzo yokuthengisa emva komgaqo ongenzi nzuzo.
5. Iimpawu zethu eziphambili:
Umthengi kuqala: imfuno yabathengi sisikhokelo seenzame zethu kunye neenkonzo.
Ukugqwesa komgangatho: Amava agqitha okulindelwe ngumthengi yinjongo yethu.
Ukudalwa kwexabiso: uhlala uzibophelele ekuphuculeni ngokuqhubekayo kubathengi kunye nexabiso lenkampani.
Iinkcukacha zeshishini: iinkcukacha zichonga impumelelo okanye ukusilela, kunye neenkcukacha zeshishini ziyisiqinisekiso sempumelelo.
Ixesha lokuposa: Mar-19-2020